News - Nsogbu nchoputa usoro nke haịdrọlik usoro nke akpaka ịkpụzi igwe
Nsogbu nchoputa nzọụkwụ nke haịdrọlik usoro nke akpaka ịkpụzi igwe
Enwere ọtụtụ mmejọ na sistemụ hydraulic nke igwe akụrụngwa akpaka. Dịka ọmụmaatụ, mmetọ mmanụ nwere ike ime ka nrụgide ọrụ nke hydraulic njikwa, nrụgide ma ọ bụ ntụzịaka na-adịghị mma, ma weta nnukwu nsogbu na nhụjuanya usoro hydraulic. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịkekọrịta usoro nchoputa.
1. General ụkpụrụ nke kpatara nchoputa
Usoro hydraulic nke ọtụtụ igwe na-akpụzi anaghị eme na mberede. Anyị na-enwe ịdọ aka ná ntị dị otú ahụ mgbe niile tupu ọdịda. Ọ bụrụ na aedaghị ntị n'ịdọ aka ná ntị a, ọ ga-ebute oke arụ ọrụ n'oge usoro mmepe. Ihe kpatara ọdịda nke usoro nchịkwa hydraulic dị ọtụtụ, ọ bụghị na-enweghị usoro. Iji chọpụta ngwa ngwa na nsogbu n'ụzọ zuru oke, ghọta n'ụzọ zuru ezu njirimara na iwu nke mmejọ hydraulic.
2. Lelee ebe ọrụ na ebe obibi nke usoro njikwa hydraulic
Usoro hydraulic nke igwe na-akpụzi kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma, yana ụfọdụ ebe ọrụ na ọnọdụ ọrụ chọrọ dị ka ikpo okwu. Yabụ, na mbido nchoputa mmejọ ahụ, anyị ga-ebu ụzọ kpebie ma chọpụta ma ọrụ ọrụ yana ọnọdụ obibi nke sistemụ njikwa na nsogbu gburugburu ebe obibi nke mba ndị gbara ya gburugburu bụ ihe nkịtị, wee mezie usoro ọrụ na mmụta na-erughị eru na ọnọdụ.
3. Chọpụta mpaghara ebe mmejọ ahụ mere
Mgbe ị na-ekpebi ọnọdụ nke mmejọ ahụ, a ga-ekpebi mmejọ ndị dị mkpa na mpaghara ahụ dabere na njirimara mmebi ahụ na njirimara, jiri nwayọ belata oghere nke mmejọ ahụ, nyochaa ihe kpatara mmejọ ahụ, chọta ọnọdụ a kapịrị ọnụ, ma mee ka ọ dị mfe nsogbu ahụ dị mgbagwoju anya.
4. Mepụta ezigbo ndekọ ọrụ
Nchọpụta nsogbu na-adabere na ndekọ na-agba ọsọ na ụfọdụ sistemụ usoro ihe ọmụma. Ntọala nke ihe ndekọ sistemụ bụ ihe ndabere dị mkpa maka igbochi, ịchọpụta na njikwa ọdịda. Mepụta tebụl nyocha maka nsogbu ọdịda akụrụngwa nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka ịchọpụta ngwa ngwa ọdịda.
Sandbox, Punch Out igwe, Flask akpụzi Machine, Ọkara Automatic Nkedo Machine, Flask Nkedo, Nkedo Nkedo Flask,